I-Zucchini ifakwe i-ratatouille kunye nenkukhu | IBezzia
I-Zucchini ifakwe i-ratatouille kunye nenkukhu
UMaria vazquez | 20/07/2021 10:00 | Isaladi kunye nemifuno
NgeCawa siye sabelana nawe ngeresiphi Inkukhu kunye neeamangileUyamkhumbula? Namhlanje sicebisa ezinye iindlela, ezinje, ukufaka inkukhu kwimenyu yakho ngendlela yoqobo. Kwaye ngaba zezi i-zucchini ifakwe i-ratatouille kunye nenkukhu zikhangeleka zilungile nakweyiphi na itafile.
Le yenye yeendlela zokupheka ezingena emehlweni akho ngenxa yomboniso wayo. Iresiphi onokuyenza Guqula iresiphi ye vegan buyisela inkukhu ngeprotein yemvelaphi yezityalo ezinje nge tofu, tempeh, heura ... khetha eyona uyithandayo!
Ukuyilungisa nangona inokubonakala inzima kulula kakhulu. Kwaye ukuba ikhona into esiyithandayo ngaye, yiyo loo nto nantsi yonke into ityiwa, sukucinga ukuba i-zucchini sisikhongozelo nje sokuqulatha ukuzaliswa. Izigodo ziyosiwa ukuze zithambe kwaye zinokutyiwa.
1 eluhlaza intsimbi yepepile, egayiweyo
1 i-tomato evuthiweyo
Iifilikhi zebele zenkukhu ezi-2 ezijiyileyo
Sika i-zucchini kwiisilinda kwaye uzikhuphe, ugcine ipulp. Beka iisilinda kwisitya esikhuselekileyo se-oveni, ixesha, thambisa ioyile yomnquma kwaye ubhake de ithambe kodwa isekwimo. Kwimeko yam yayiyimizuzu engama-20 ngo-180ºC
Okwangoku, epanini eneepunipoli ezimbini zeoyile susa i-anyanisi kunye nepelepele Ngexesha lemizuzu engama-10.
Ixesha lihambile, faka inyama ye-zucchini idayisi kwaye upheke eminye imizuzu emi-5.
Emva yongeza iitumato ezicociweyo Kwaye upheke ubushushu obuphakathi kangangemizuzu eli-15.
Sebenzisa loo mizuzu iyi-15 ukusika inkukhu, ukuba awukenzi okwangoku, yixube kwaye yifake epanini ngaphezulu kobushushu obuphakathi.
Xuba inkukhu nabanye zezithako zokuzalisa nokugcina.
Xa iisilinda zucchini zithambile, bagcwalise kwaye ungeze itshizi encinci encinci ngaphezulu.
Babuyisele ehovini de itshizi inyibilike.
Ncedisa i-zucchini efakwe i-ratatouille kunye nenkukhu eshushu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iresiphi » Isaladi kunye nemifuno » I-Zucchini ifakwe i-ratatouille kunye nenkukhu
4 itafile yokunika itafile yakho umbala wombala